ဖန် ဆင်း ခြင်း သက် သေ များ (၄) | Calvary Burmese Church
မျောက် က နေ လူ ဖြစ် သ တဲ့ လား။
၂၀၀၉ ခု နှစ် တွင် ကျ ရောက် သော ဒါ ၀င် ၏ နှစ် ၂၀၀ ပြည့်မွေး နေ့ကို ပ ညာ ရှင် အ သိုင်း အ ၀ိုင်း များ က သောင်း သောင်း ဖြ ဖြ ကြို ဆို ကျင်း ပ နေ ကြ သည်။ ဒါ ၀င် ၏ နှစ် ၂၀၀ ပြည့် အ ထိမ်း အမှတ် အ ဖြစ် ထုတ် ဝေ သော ”မျိူး နွယ် တို့၏ မူ လ အ စ” (On the Origin of Species) စာ အုပ် များ၊ စာ အုပ် ဆိုင် တို့၌ ပ လူ ပျံ အောင် ရောက် ရှိ လာ သည်။ ဒါ ၀င် ကို ထိပ် တန်း ပ ညာ ရှင် ကြီး အ ဖြစ် လူ တို့ဂုဏ် ပြု ကြ သည် ။ ခေတ် သည် ပြောင်း လဲ ခဲ့ ပေ ပြီ ။ လွန် ခဲ့ သော နှစ် ၂၀၀ ခန့်က Evolution Theory အကြောင်း သင် ကြား ခြင်း ကို ဘာ သာ ရေး ခေါင်း ဆောင် များ က သော် လည်း ကောင်း ၊ လူ မှု အ ဖွဲ့အ စည်း များ က သော် လည်း ကောင်း ၊ ပိတ် ပင် တားမြစ် ခဲ့ သည်။ ကျမ်း စာ မှ လာ သော က မ္ဘာ ဦး ကျမ်း ၏ သင် ကြား ချက် များ ကို အ မှန် ဖြစ် ကြောင်း လက် ခံ ခဲ့ ကြ သည်။ ယ ခု ခေတ် တွင် မူ အ ခြေ အ နေ တို့ သည် ပြောင်း ပြန် ဖြစ် ခဲ့ ပေ ပြီ။ ကျမ်း စာ ကို စာ သင် ကျောင်း များ ၌ သင် ကြား ခြင်း ကို ပိတ် ပင် ခံ ရ ပြီး၊ ဘု ရား ရှင် မှ သက် ရှိ အား လုံး တို့အား ဖန် ဆင်း ခဲ့ ကြောင်း ပြော ဆို သူ များ သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ခံ ရ ကြ လေ ပြီ။ အ သိ ဥာဏ် ပ ညာ မြင့် မား သော သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ က ဒါ ၀င် ၏ အ ယူ ၀ါ ဒ ကို ဘု ရား တ ဆူ အ ဖြစ် ကိုး ကွယ် လာ ကြ ပြီး ဒါဝင် ဘာ သာ ၀င် များ မ သိ မ သာ ဖြစ် လာ ကြ သည်။ တ ခု သော ဘာ သာ ရေး အ ဖွဲ့အ စည်း က မူ Evolution ကို လက် ခံ လိုက် ကြ ပြီး ၊ ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ကို Symbolism ဟု သတ် မှတ် လိုက် ကြ သည်။ Evolution ကို ငြင်း ပယ် သူ တို့သည် သိ ပ္ပံ နှင့် ဆိုင် သော အ လုပ် အ ကိုင် များ တွင် နေ ရာ မ ရ ခြင်း များ ဖြစ် လာ သည်။ ၀မ်း နည်း စ ရာ ကောင်း လေ စွ။ Evolution တစ္ဆေ သည် ကျွန် တော် တို့အား ခြောက် လှန့်နေ ပြီ တ ကား။ ဤ လော က ကြီး အား ပြောင်း ပြန် လှန် ပစ် လိုက် သော Evolution Theory သည် အ ဘယ် ကဲ့ သို့အ စ ပြု ခဲ့ ပါ သ နည်း။
ဒါ ၀င် သည် ငယ် ရွယ် စဉ် အ ခါ က အ င်္ဂ လန် မှ နေ ၍ HMS Beagle ဟု အ မည် တွင် သော သ ဘောင်္ ဖြင့် ခ ရီး ထွက် ခဲ့ သည်။ ဒါ ၀င် ၏ ရည် ရွယ် ချက် မှာ တောင် အ မေ ရိ က တိုက် ၏ အ ရှေ့ဘက် ကမ်း နှင့် အ နောက် ဘက် ကမ်း တို့ ၏ မြေ ပုံ ကို ရေး ဆွဲ ရန် လို အပ် သော အ ချက် အ လက် များ စု ဆောင်း လို ခြင်း ဖြစ် သည်။ ထို သို့ ခရီး ပြု ရင်း တောင် အ မေ ရိ က တိုက် ကမ်း ခြေ နှင့် မိုင် ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်ကွာ ဝေး သော Galapagos Islands ဟု အ မည် တွင် သည့် ကျွန်း စု များ သို့ရောက် ရှိ ခဲ့ သည်။ ထို ကျွန်း စု များ ၌ ငါး ပတ် ကြာ မျှ နေ ထိုင် စဉ် အ တွင်း ၊ ကျွန်း စု ရှိ သ တ္တ ၀ါ များ ၏ ထူး ခြား ပုံ ကို သ တိ ပြု မိ သည်။ ကျွန်း တ ခု နှင့် တ ခု ရှိ မျိုး တူ သ တ္တ ၀ါ များ သည် အ နည်း ငယ် ကွဲ ပြား ခြား နား နေ သည် ကို တွေ့မြင် ခဲ့ သည် ။ ဥ ပ မာ ဆို ရ လျင် Finch ခေါ် ငှက် သည် ကျွန်း တ ကျွန်း နှင့် တ ကျွန်း မ တူ ပဲ နူတ် သီး အ တို အ ရှည် ၊ အကြီး အ သေး ကွာ သည်။ ထို တွေ့ရှိ ချက် ကို အ ခြေ ပြု ၍ ဒါ ၀င် သည် စိတ် ထဲ ၌ စဉ်း စား မိ သည်။ သ တ္တ ၀ါ များ တ ကောင် နှင့် တ ကောင် မ တူ ရ ခြင်း မှာ သ ဘာ ၀ ပတ် ၀န်း ကျင် ကြောင့် ဖြစ် မည်။ စား ရ သည့် အ စား အ စာ၊ နေ ရ သည့် အ ခြေ အ နေ တို့ ကို လိုက် ၍ သ တ္တ ၀ါ တို့သည် လိုက် လျော ညီ ထွေ စွာ နေ ရ သည်။ သို့မ ဟုတ် လျင် အ မျိုး ပြုန်း သွား ပေ လိမ့် မည်။ သက် ရှင် ရပ် တည် နိုင် ရေး အ တွက် သ တ္တ ၀ါ တို့ သည် ပတ် ၀န်း ကျင် ကို လိုက် လျော ညီ ထွေ စွာ နေ ထိုင် ရင်းဖြည်း ညင်း စွာ ပုံ သ ဏ္ဍန် ပြောင်း လဲ လာ သည်။ အ င်္ဂ လိပ် လို ဆို ရ လျင် Evolution by Natural Selection ဟု ခေါ် သည်။ ဒါ ၀င် သည် ထို ကျွန်း စု များ မှ တွေ့ရှိ ချက် တို့ ကို အ ခြေ ခံ ၍ ၁၈၅၉ တွင် နာ မည် ကျော် ကြား လှ သော On the Origin of Species စာ အုပ် ကို ထုတ် ဝေ ခဲ့ သည်။ ထို စာ အုပ် ထွက် ပြီး နောက် သက် ရှိ သ တ္တ ၀ါ တို့၏ မူ လ အ စ ဖြစ် ပေါ် လာ ပုံ အ မြင် သည် ဘယ် အ ခါ မျှ နှင့် မ တူ အောင် အ ပြောင်း အ လဲ ကြီး ပြောင်း လဲ သွား တော့ သည်။
Evolution Theory ကို အ ကျဉ်း ချုပ် ရ လျင် က န ဦး ၌ ပင် လယ် ထဲ တွင် ဆဲလ် တ ခု တည်း ဖြင့် တည် ဆောက် ထား သော အ ကောင် ငယ် လေး များ သာ ရှိ သည်။ အ ချိန် ကာ လ ကြာ မြင့် လာ သော အ ခါ ထို အ ကောင် လေး များ သည် သ ဘာ ၀ ပတ် ၀န်း ကျင် ကို လိုက် ၍ ဆဲလ် ပေါင်း များ စွာ ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော ငါး ကဲ့ သို့သော အ ဆင့် မြင့် သ တ္တ ၀ါ များ ဖြစ် လာ ကြ သည်။ ထို ငါး တို့တွင် အ ချို့တို့ သည် နှစ် ပေါင်း များ စွာ ကြာ သော အ ခါ ကုန်း ပေါ် သို့တက် ၍ နေ ထိုင် ရန် ကြိုး စား ရင်း ကုန်း နေ ရေ နေ သ တ္တ ၀ါ များ အ ဖြစ် ပြောင်း လဲ လာ သည်။ ထို ကုန်း နေ ရေ နေ သ တ္တ ၀ါ များ မှ တ ဖန် အ ချို့တို့ သည် တွား သွား သ တ္တ ၀ါ များ ဖြစ် လာ ကြ ပြီး ၊ အ ချို့တို့သည် နို့တိုက် သ တ္တ ၀ါ များ ဖြစ် လာ ကြ သည်။ နို့တိုက် သ တ္တ ၀ါ များ မှ အ ဆင့် ဆင့် ပြောင်း လဲ ကြ ပြီး နောက် အ ချို့တို့ သည် မျောက် များ ဖြစ် လာ ကြ သည် ။ မျောက် များ မှ သည် ပတ် ၀န်း ကျင် နှင့် သ ဟ ဇာ တ နေ ထိုင် ကြ ရင်း အ သိ ဥာဏ် ရည် မြင့် မား သော လူ သား တို့ သည် နောက် ဆုံး သော အ ဆင့် မြင့် သ တ္တ ၀ါ များ အ ဖြစ် နှင့် ဤ က မ္ဘာ မြေ ပေါ် တွင် ပေါ် ထွက် ခဲ့ ရ သည်။ ( စ ကား ချပ်။ ။ စာ ရေး သူ ယ ခု ဖော် ပြ ခဲ့ သော Evolution ဖြစ် စဉ် သည် လွယ် ကူ ရှင်း လင်း ရန် အ လို့ငှာ အ တို ချုပ် ဖော် ပြ ခြင်း သာ ဖြစ် သည်။ အ မှန် မှာ ယ ခု ဖော် ပြ သည် ထက် များ စွာ ရှုပ် ထွေး သော ဖြစ် စဉ် တစ် ခု ဖြစ် သည်။ ပို မို သိ လို ကြ ပါ လျင် Evolution Tree အ ကြောင်း ကို ရှာ ဖွေ ဖတ် ရှု ကြ ပါ ကုန်။)
Evolution သီ အို ရီ မှန် ကန် ပါ လျင် ဤ က မ္ဘာ မြေ ကြီး တွင် ”စပ်ကြား” သ တ္တ ၀ါ ( Transitional Form ) ကျောက် ဖြစ် ရုပ် ကြွင်း များ ကို မြောက် များ စွာ တွေ့ရှိ ရ မည် ဖြစ် သည်။ ဥ ပ မာ မျောက် မှ တ ဖြည်း ဖြည်း လူ ဖြစ် လာ သည် ဟု ဆို လျင် မျောက် မ ကျ၊ လူ မ ကျ သော ”စပ်ကြား” သ တ္တ ၀ါ များ ရှိ ခဲ့ ရ ပေ မည်။ ဒိုင် နိုး ဆော များ မှ တ ဖြည်း ဖြည်း ငှက် ဖြစ် သည် ဟု ဆို လျင် ဒိုင် နိုး ဆော မ ကျ ၊ ငှက် မ ကျ သ တ္တ ၀ါ များ ရှိ ရ ပေ မည် ။ သို့ပါ သော် လည်း လက် တွေ့တွင် မူ ထို့ကဲ့ သို့မ ဟုတ် ။ ”စပ်ကြား” သ တ္တ ၀ါ တို့ ကို မြောက် မြား စွာ တွေ့ ရန် ဝေး စွ ။ လုံး ၀ နီး ပါးမ ရှိ ကြောင်း ပြော လျင် ရ သည်။ ထို သို့”စပ်ကြား” သ တ္တ ၀ါ များ ရှာ ဖွေ မ တွေ့ရ ခြင်း ကို ပျောက် ဆုံး နေ သော ကွင်း ဆက် များ (Missing Link) အ ဖြစ် မှတ် တမ်း တင် ခဲ့ ရ သည်။ ဒါ ၀င် ကိုယ် တိုင် ဤ အ ချက် ကို သူ ထုတ် ဝေ ခဲ့ သော On the Origin of Species ၌ ၀န် ခံ ခဲ့ သည်။ အ နက် ရွင်း မည် စိုး သော ကြောင့် အ င်္ဂ လိပ် ဘာ သာ ဖြင့် ပင် ဖော် ပြ လိုက် ပါ သည်။
“Why, if species have descended from other species by fine graduation, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of the species being, as we see them, well defined?” From Chapter6– Difficulties on Theory ( On the Origin of Species )
ဒါ ၀င် သည် missing link များ ကို ရှာ ဖွေ ရန် အ ချိန် လုံ လောက် မှု မ ရှိ ခြင်း ကြောင့် ရှာ ဖွေ မ တွေ့သေး ခြင်း ဟု ယူ ဆ သည်။ အ ချိန် ကာ လ ကြာ မြင့် လာ သည် နှင့် အ မျှ ထို missing links များ ကို တွေ့ရှိ လာ လိမ့် မည် ဟု မြော် လင့် သည်။ သို့ပါ သော် လည်း နှစ် ပေါင်း နှစ် ရာ ကျော် သာ ကြာ သွား သည်။ ယ ခု ခေတ် အ ချိန် အ ခါ ထိ တ ကယ် စစ် မှန် သော missing link များ ကို ရှာ ဖွေ တွေ့ ရှိ ခဲ့ ခြင်း မ ရှိ ပါ လေ။ သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ ပြော ကြား သော Human Evolution နှင့် ပတ် သက် သည့် missing link များ ရှိ ပါ သည်။ ၄င်း တို့ ကို ဖော် ပြ ရ လျင်
PiltDown Man – (PiltDown) လူ ၏ ရုပ် ကြွင်း ကို ရှာ ဖွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ သူ မှာ Charles Dawson ဖြစ် သည်။ ၁၉၁၂ ခု နှစ် ၀န်း ကျင် ခန့်က ရှာ ဖွေ တွေ့ ရှိ ခဲ့ ပြီး လူ နှင့် မျောက် ဆက် စပ် သော missing link အ နေ ဖြင့် သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ နှင့် Evolution နောက် လိုက် များ က ခံ ယူ ကြ သည်။ သို့ပါ သော် လည်း ၄၁ နှစ် သာ ခံ သည်။ ၁၉၅၃ ခု နှစ် တွင် ထို ရုပ် ကြွင်း သည် လုပ် ကြံ ဖန် တီး ထား သော လိမ် ညာ မှု ကြီး ဖြစ် ကြောင်း ဘူး ပေါ် သ လို ပေါ် ခဲ့ သည်။ လုပ် ကြံ ဖန် တီး သူ မှာ Charles Dawson ကိုယ် တိုင် ပင် ဖြစ် သည် ဟု အ များ က ယူ ဆ ကြ သည်။ ခေတ် သစ် လူ ဦး ခေါင်း ခွံ နှင့် Orangutan မျောက် မ ၏ မေး ရိုး ကို အ နည်း ငယ် တံ စဉ်း ဖြင့် တိုက် စား လျက် တပ် ဆင် ထား သည်။ ရှေး ဟောင်း ပုံ သ ဏ္ဍန် ပေါက် အောင် ဆေး အ နည်း ငယ် ဆိုး ထား သည်။ တံ စဉ်း ရာ များ ကို အ မှတ် မ ထင် တွေ့ရှိ ရာ မှ လိမ် လည် မှု ကြီး ဖြစ် ကြောင်း ပေါ် ပေါက် ခဲ့ ရ သည် ။ ၁၉၅၃ ကျောင်း သင် ခန်း စာ၊ စာ အုပ် များ ၌ piltdown man အ ကြောင်း ကို သင် ကြား ခဲ့ ပြီး မှ ပြန် လည် ဖြုတ် ပစ် ခဲ့ ရ သည်။ ဤ အ ချက် ကို ကြည့် ၍ သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ သည် မိ မိ တို့သီ အို ရီ မှန် ကြောင်း ကို သက် သေ ပြ လို လျင် မ မှန် ကန် သော လမ်း ကြောင်း ကို ပင် ရွေး ချယ် တတ် ကြောင်း သ တိ ပြု ရ မည် ပင်။( လိမ် လည် မှု အ တု ဖြစ် ကြောင်း ကို ဖတ် ရန် http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man ကို နှိပ် ပါ။
Java Man – ဂျား ဗား လူ ကို Dr. Eugene Dubois က ရှာ ဖွေ တွေ့ ရှိ သည်။ ဦး ခေါင်း ခွံ အ ပေါ် ပိုင်း တစ် ခု၊ ပေါင် ရိုး နှင့် သွား များ ကို ပေ ၅၀ အ ကွာ တစ် ကွဲ တစ် ပြား စီ တွေ့ခဲ့ သော် ငြား လည်း သ တ္တ ၀ါ တစ် ဦး တည်း က လာ သော အ ရိုး များ ဟု ယူ ဆ ခဲ့ သည်။ ပေါင် ရိုး သည် လူ သား တစ် ဦး ၏ ပေါင် ရိုး ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် နိုင် ပြီး၊ ဦး ခေါင်း ခွံ သည် အ ခြား မျောက် တစ် ကောင် ၏ ဦး ခေါင်း ခွံ ဖြစ် နိုင် သည် ။ ထို အ ရိုး စု များ ကို Dubois ကိုယ် တိုင် က missing link အ နေ ဖြင့် မ သေ ချာ သော ကြောင့် နှစ် ပေါင်း များ စွာ သိမ်း ဆည်း ထား ခဲ့ သည်။ နောက် ပိုင်း မှ Gibbon မျောက် ဖြစ် ဖို့ပို များ သည် ဟု မ သေ မ ချာ ပြော ကြား ခဲ့ သည်။ ထို သို့မ သေ မ ချာ ပြော ကြား ခဲ့ ပါ သော် လည်း သင် ရိုး စာ အုပ် များ ၌ missing link အ နေ ဖြင့် မ ရှိ မဲ့ ရှိ မဲ့ သက် သေ က လေး ကို တင် ပြ ပြန် ပါ သည်။ ယ ခု နောက် ပိုင်း သ တင်း အ ရ java man သည် လူ သား မျိုး နွယ် သာ ဖြစ် ကြောင်း ပြန် လည် မှတ် တမ်း တင် ခဲ့ သည်။
Nebraska Man – နီဘရာစကာ လူ ကို Dr. Henry FairField က ၁၉၂၂ ခု နှစ် တွင် ရှာ ဖွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ သည်။ သွား လေး တစ် ချောင်း သာ တွေ့ရှိ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပြီး ထို သွား သည် လူ သွား နှင့် မျောက် သွား စပ် ထား သော ပုံ သ ဏ္ဍန် ရှိ သည် ဟု ကောက် ချက် ချ ကြ သည်။ ထို သွား လေး တစ် ချောင်း ကို ပင် အ ခြေ ပြု ၍ နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ ကို ပြန် လည် တည် ဆောက် ကြ သည်။ နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ သာ မ ဟုတ် ၊ သူ ၏ မိန်း မ နှင့် မိ သား စု ကို ပင် စိတ် ကူး ယာဉ် ကာ ပန်း ချီ နှင့် ပုံ ဖော် လိုက် သေး သည်။ နောက် ပိုင်း ၌ သိ ရှိ ရ သည် မှာ ထို သွား များ သည် မျိုး တုန်း သွား ပြီ ဖြစ် သော ၀က် တစ် မျိုး ၏ သွား များ ဖြစ် နေ ကြောင်း ပင်။ ထို သို့ သိ ရှိ ရ သည် နောက် ပိုင်း တွင် နီ ဘ ရာ စ ကာ လူ သား ကို Evolution သ မိုင်း မှ တိတ် တ ဆိတ် လျင် မြန် စွာ ဖျောက် ဖျက် လိုက် ကြ သည်။
ယ ခု နောက် ဆုံး သ တင်း အ ရ ဆို လျင် Ida ဟု ခေါ် သော မျောက် သ ဏ္ဍာန် ကျောက် ဖြစ် ရုပ် ကြွင်း ကို ဂျာ မ ဏီ ၌ တွေ့ ရှိ ခဲ့ ရ သည်။ ၄င်း ကို သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ က missing link ဟူ ၍ ပြော ဆို နေ ကြ ပြန် ပါ သည်။ သို့ ပါ သော် လည်း Evolutionists များ အ ကြား တွင် ပင် ဟုတ် မ ဟုတ် အ ငြင်း ပွား ဆဲ ပင် ရှိ ပါ သေး သည်။
Evolution သီ အို ရီ တွင် missing link ပြဿနာ အ ပြင် အ ခြား ပြဿနာ များ စွာ ရှိ ပါ သည်။ အ ချိန် ရ လျင် စာ ရေး သူ ဆောင်း ပါး တစ် ပုဒ် ရေး မည် ဟု စိတ် ကူး ပါ သည်။ ယ ခု ဆောင်း ပါး သည် လူ သား နှင့် ဆိုင် သော (Human Evolution) ကို သာ ဦး တည် ရေး သား ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ သည်။
လူ သား တို့ သည် ဘု ရား ရှင် မှ လူ သား တို့ အား ဖန် ဆင်း ခဲ့ သည် ကို ရိုး သား စွာ မ ခံ ယူ နိုင် ကြ ပေ။ ဘု ရား ရှိ ခြင်း ကို ပယ် လို ကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ပင် လျင် Evolution သီ အို ရီ ကို ဘု ရား သ ဖွယ် ကိုး ကွယ် ခြင်း များ ရှိ လာ ကြ ပြီး ၀ါ ဒ များ ဖြန့် လာ ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ သည်။ မည် ကဲ့ သို့ ပင် ဖြစ် စေ ကာ မူ ယုံ ကြည် သူ တို့ သည် ဘု ရား ရှင် ဖန် ဆင်း ထား သည် ကို မြဲ မြံ စွာ ကိုင် စွဲ ထား ကြ ရန် လို ပြီး၊ ဘု ရား ရှင် ပေး ထား သော အ သိ ဥာဏ် ဖြင့် ၊ အ မှား နှင့် အ မှန် ကို ပိုင်း ခြား သိ မြင် ရန် နှင့် ၊ နာ မည် ကျော် ကြား လှ သော Evolution သီ အို ရီ သည် အ မှား များ ဖြင့် ပြည့် နှက် နေ ကြောင်း သိ ရှိ စေ ရန် ဤ ဆောင်း ပါး ကို ရေး သား လိုက် ရ ပါ သည်။ စာ ဖတ် သူ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ များ အား လုံး ဘု ရား ရှင် ကောင်း ကြီး ပေး ပါ စေ။
လှ မင်း သူ
ဥာဏ်ပညာကို ရှာ၍ရသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ပညာကုန်သွယ်ခြင်းသည် ငွေကုန်သွယ်ခြင်းထက် သာ၍ကောင်း၏။ ပညာကုန်သွယ်၍ရသော အမြတ်လည်း ရွှေစင်ထက် သာ၍ကောင်း၏။ ပညာသည် ပတ္တမြားထက်သာ၍ အဖိုးထိုက်ပေ၏။ နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသော အရာတို့သည် ထိုရတနာကို မပြိုင်နိုင် ကြ။
သုတ္တံကျမ်း။ ။ ၃း ၁၃ – ၁၅
အ ညွန်း များ။ ။
Creation or Evolution , Does it really matter what you believe? Free Booklet From United Church of God.
Galapagos Conservation Trust , About Darwin
Charles Darwin and the Galapagos Island
Science Article Evolution: Charles Darwin was wrong about the tree of life
Tree of Life from Wiki
The Theory of Evolution Disproved, Article from Overcome Problems
Who Was Java Man: Article From Creation Ministry Website
The Nebraska Man Scandal: Article From Darwinism Refuted
မှတ်ချက်။ ၀ိညာဉ်သစ်မဂ္ဂဇင်း မှကူးယူတင်ပြထားပါသည်။
2 comments on “ဖန် ဆင်း ခြင်း သက် သေ များ (၄)”
I can’t read, see only block letters. Please change to pdf and everybody can read easily. Thank you very much. God bless you.
Thank you so much for reading our blog. First of all you should install zawgyi burmese font into your computer. it is free and available in many sites in the net. If you have installed zawgyi font and still can’t read the blog, change your browser to firefox. Explorer, chrome, safari and some other browsers do not work properly with zawgyi myanmar fonts. In the future I will try to put pdf file, too. Thank you and God bless you.
This entry was posted on February 24, 2012 by thawngno in Christianity Related Articles.
84,426 Since July 2011